Verdelite gemstone ndeye green greenmalmaline - vhidhiyo
Verdelite gemstone ndeye green greenmalmaline. Isu tinoita machira echinyakare ane verdelite gemstone akaiswa semhete, mhete, chishongo, rundarira kana pendende. Verdelite zvinoreva.
Tenga verdelite chaiyo muchitoro chedu
Iko kwakasiyana kwetalmaline yakanangana girini, imwe nguva neimwe nzira inoonekwa segirini tourmaline mukutengesa. Neruvara kubva pamagetsi anopenya kusvika kune husina kusimba hunyoro hunoita kuti rive rakatsvakwa-kwazvo mumabwe mumhuri yematombo.
Iyo crystalline boron silicate mineral yakasanganiswa nezvinhu zvakadai sealuminium, iron, magnesium, sodium, lithium, kana potasium. Inotsanangurwa sedombo rakakosha-dombo.
Green tourmaline inhengo nhanhatu-mhete cyclosilicate ine trigonal crystal system. Inoitika seyakareba, yakatetepa kusvika kune yakakora prismatic uye makoramu makristaro ayo anowanzo kuve mativi matatu muchikamu chemuchinjikwa, kazhinji aine kumeso kwakakomberedzwa kumeso. Maitiro ekumisa kumagumo emakristasi dzimwe nguva asymmetrical, anonzi hemimorphism. Makristasi madiki akatetepa akajairika mugranite yakavezwa-yakanaka inonzi aplite, inowanzo gadzira maratidziro e-radial daisy-kunge mapatani. Verdelite tourmaline inosiyanisirwa neayo matatu-mativi prism. Hapana imwe yakajairika mineral ine mativi matatu. MaPrism anotarisana kazhinji anorema akatwasuka mitsara inoburitsa yakakomberedzwa mativi maitiro. Green tourmaline kashoma zvakakwana euhedral.
Iri ibwe rinokosha rekupa simba rekuuraya, simba rinoramba riripo, simba repfungwa rakakosha kuti uzive zvakakosha. Ichakwezva midziyo, rudo uye hutano hunodiwa nemuridzi. Dombo rinobatsira kupayona nzira inoenda kurombo rakasimba. Iri ibwe rinokosha kushandura kubvisa kuna kuwedzera. Ichaburitsa cheni yemhanza yakanaka. Iyo dombo rinokupawo mukana wekupokana nezvinhu zvitsva. Iwe unowana mukana wekuti utore pamusoro pemiganhu mipingo. Iyo inokutadzisa iwe kubva kugutsikana nemamiriro azvino. Iri ibwe rinogonesa kuwedzera mukana wezveramangwana.
Tenga verdelite yechisikigo muchitoro chedu
Isu tinoita machira echinyakare ane verdelite gemstone akaiswa semhete, mhete, chishongo, rundarira kana pendende.
Chii chinonzi verdelite chinoshandiswa?
Green Tourmaline yakanakira kurapa zvinangwa, sezvo ichigona kutarisa simba rayo rekurapa, kubvisa iyo aura, uye kubvisa mabhureki. Green Tourmaline inowanzo shandiswa kuvhura nekumisikidza iyo Moyo chakra, pamwe nekupa pfungwa yerunyararo uye kugadzikana kune moyo uye huta hurongwa.
Ndekupi kwekutenga verdelite?
Isu tinotengesa verdelite muchitoro chedu
Is verdelite isingawanzo?
Iwo makuru e green greenmalmalmal deposits ari muBrazil, Namibia, Nigeria, Mozambique, Pakistan neAfghanistan. Asi green greenmalmaline yemavara akanaka uye kujekesa chinhu chisingawanzo mune chero dombo rematombo. Uye kana, pamusoro pezvo, ivo zvakare vasina ma inclusions, ivo vanonyanya kushuvira chaizvo.
Verdelite yakakosha here?
Green tourmaline inodhura zvakanyanya kana iine rimwe bhuruu mairi kana ichitaridzika senge emaradhi senge mune chrome tourmaline.
Cat yeziso tourmaline
Tags Cat ziso, Tourmaline